नगरपालिकाको बोहोराफाँटमा पहिलोपट बस पुग्दा खुशीयाली - नेपालबहस
नगरपालिकाको बोहोराफाँटमा पहिलोपट बस पुग्दा खुशीयाली
२४ मंसिर, बागलुङ । गलकोट नगरपालिका–३ को बोहोराफाँट–लमाइ सडकमा शनिबार पहिलोपटक बस गुड्यो । दुई गाउँ जोड्ने सडक ‘लिङ्क रोड’ उद्घाटनका लागि नगरप्रमुख भरत शर्मा गरैलगायत बसमा सवार थिए ।
उद्घाटनस्थलमा प्रमुख अतिथिसहितलाई गाउँलेले स्वागत गरे । अबिर र माला पहिराए । भजनकीर्तन गरे, नाचे । एकापसमा खुसी साटे । बोहोराफाँट र लमाइ वारिपारिका गाउँ हुन् । छिमेकी भएर पनि दुई बस्तीबीच आउजाउ सहज थिएन । मोटरबाट जान तल हटिया बजार झरेर मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै जानुपथ्र्यो ।
पैदलयात्रासमेत जोखिमपूर्ण थियो । अब भने दुई गाउँलाई बीचबाट सिधा सडकले जोडेको छ । “मान्छे हिँड्ने बाटो पनि थिएन, मोटरबाटो बनेपछि ठूलो सुविधा भयो”, स्थानीय दानबहादुर बोहोराले भने ।
उनका अनुसार अब सडकमार्ग हुँदै पैदलै हिँडे पनि सजिलै अर्को गाउँ पुग्न सकिन्छ । भिरालो भू–बनोट, बीचमा ठूला भिर र खोँच भएकाले एक गाउँबाट अर्कोमा जान तल झरेर जानुपर्ने बाध्यता थियो । हिँडेर जाँदा पनि फेरो बाटो समात्नुपथ्र्यो । डेढ किमीको बोहोराफाँट–भुल्केपानी–घट्टेखोला ‘लिङ्क रोड’ ले त्यस क्षेत्रका दुई हजार ५०० घरधुरीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने वडाध्यक्ष वीरजङ्ग भण्डारीले बताए। झण्डै रु १० लाखको लागतमा उक्त सडकको मार्ग खोलिएको हो । नगरपालिकाले चालू आवमा रु छ लाख र गत आवमा रु डेढ लाख बजेट छुट्याएको थियो ।
बोहोराफाँटदेखि माम्ले हुँदै बराहथानसम्म ‘लिङ्क रोड’ पु¥याउने योजना नगरपालिकाको छ । यही वर्ष नगरपालिकाको रु चार लाख बजेटबाट थप मार्ग खोल्ने काम हुँदैछ । “वडा नं ३ का सबै गाउँ, बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य छ”, वडाध्यक्ष भण्डारीले भने । ग्रामीण सडकको पहुँच विस्तारले सर्वसाधारणको सुविधासँगै पर्यटन प्रवद्र्धन र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमासमेत टेवा पुग्नेछ ।
कोरोना बढेसँगै विदेशी पर्यटक मनाङमा अलपत्र १० मिनेट पहिले
नयाँ सरकार कोभिडविरुद्ध सक्रिय हाेला त ? १५ मिनेट पहिले
पूर्वराजाले दिए शुभचिन्तक तथा आफ्नाे उपचारमा खटिने डाक्टर र नर्सलाई धन्यवाद ४४ मिनेट पहिले
प्रतिष्ठित व्यवसायी घिमिरेले चीनबाट अक्सिजन सिलिण्डर लगायतका सामग्री ल्याउँदै ५५ मिनेट पहिले
आगामी जेठ २ गतेदेखि चिनियाँ खोप लगाइने ३ दिन पहिले
महोत्तरीमा निषेधाज्ञा जेठ १० गतेसम्म कायम १ दिन पहिले
मंगलबार अपि पावरको हकप्रद सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन ४ दिन पहिले
२७ वाणिज्य बैंकः सबैभन्दा कम निक्षेप संकलन गर्नेको पहिलो नम्बरमा नेपाल बंगलादेश बैंक, अन्य कसको कति ? ६ दिन पहिले
कर्णालीमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ८२ पुग्यो ६ दिन पहिले
कङ्काली डाडाँबाट देखिएको काठमाडौं उपत्यका ६ दिन पहिले
नेपाली कांग्रेस आन्तरिक रणनीतिमा ७ दिन पहिले
ओली र गौतमबीच बालुवाटारमा डिनर बैठक ३ हप्ता पहिले
प्रभु इन्स्योरेन्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने बिहीबार अन्तिम दिन १ हप्ता पहिले
लुम्बिनी जसपाका ४ मन्त्रीको सांसद पद गुम्यो २ हप्ता पहिले
उपत्यकाबाट आईपीएलमा सट्टेबाजी गर्ने ११ जना नियन्त्रणमा ३ हप्ता पहिले
निर्वाचन क्षेत्रको बजेट स्थानीय तहलाई नदिने २ वर्ष पहिले
कुमारी बैंकका ग्राहकलाई सिद्धार्थ होटल–रेष्टुरेन्टमा विशेष छुट १० महिना पहिले
नेपाल प्रहरीमा तीन हजार ५९६ दरबन्दी थप २ वर्ष पहिले
दिनदिनै संक्रमण दर बढ्दै, एकैदिन थपिए २३५१ जना संक्रमित ३ हप्ता पहिले